खस्कियो आर्थिक स्थिति, चालु खाता... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
मुलुकको वित्तीय स्थिति खस्किएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार अधिकांश सूचक खस्किएका छन्।
जेठ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फिति दर अर्थात मूल्य बृद्धि ६.२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा यस्तो दर ४. १ प्रतिशत थियो वैशाख महिनामा यस्तो दर ५. ३ प्रतिशत थियो।
आन्तरिक रुपमा मूल्य बृद्धि बढ्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा भने चुलिँदै गएको छ। ११ महिनामा १२ खर्ब ११ अर्ब व्यापार घाटा पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा १७. २ प्रतिशतले बढेको हो।
व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन अर्थात शोधनान्तर स्थितिमा दवाव परेको छ। ११ महिनामा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ९० अर्ब ८३ करोड ऋणात्मक छ। यसको अर्थ मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम झण्डै १ खर्ब छ।
मुलुकको वित्तीय स्थिति खस्कँदै जाँदा रेमिट्यान्सले मात्रै टेवा पुर्याएको देखिन्छ। भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको छ। एक वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १७. ५ प्रतिशतले बढेको छ। ११ महिनामा ७ अर्ब ९९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ४, २०७६, ०४:११:००